15684927 | Steem Block | Steem
22 transactions in this block, produced at 2017-09-22 08:39:27 (UTC)
6c70b027 popol upvote @arbitrarykitten/a-conversation-with-papa-pepper-p… Sep 22 '17
54689d8d blud1488 follow robertar Sep 22 '17
2a44102e flyyou upvote @numlock/re-memeddewi-poetry-cinta-masa-depan-less… Sep 22 '17
60412182 htinlinaung authoredapost: @htinlinaung/undefinedya-ngm-tankhaelundef… Sep 22 '17
ebb191b4 blud1488 follow robbieretard Sep 22 '17
a6818973 funaddaa follow vijaysharma Sep 22 '17
8d82de4e cannizzozephieri follow johnjamesharpe Sep 22 '17
bec38165 daile upvote @venti/7qnht8 Sep 22 '17
1b749ced yananaca upvote @zanopiam/3u3hr4-lemnasto Sep 22 '17
9de9fd38 bilta upvote @stellabelle/meet-a-steemit-star-overkillcoin-plus… Sep 22 '17
97e0d9dc blud1488 follow rizaldamti Sep 22 '17
6784f74f anomaly upvote @minnowbooster/comment-1506069435475 (1%) Sep 22 '17
1665bb62 khavl upvote @stephenkendal/from-triggering-the-dmamapping-buy-… Sep 22 '17
bbe77b07 arunava upvote @marialin/commitment-an-original-poem (1%) Sep 22 '17
df5b3a2a kincartkaper upvote @tarebudsdis/re-darwing-baez-bitpagos-anuncia-plan… Sep 22 '17
8a0a01db cookie1225 authoredapost: @cookie1225/spring-bloom-cherry-white-tree… Sep 22 '17
4c4d9d99 blud1488 follow rickyjrx Sep 22 '17
f5f1067b mohammedfelahi upvote @ralph-rennoldson/current-earnings-if-i-had-invest… Sep 22 '17
868944e0 shoggoth authoredapost: @shoggoth/was-ist-eine-blockchain-warum-de… Sep 22 '17
868944e0 shoggoth comment_options
51c90a0b zhgilmaks upvote @chrissysworld/colorchallenge-friday-blue-the-deep… Sep 22 '17
7ab94976 bellyrub upvote @karencarrens/bookmarkable-series-don-t-lose-your-… (4.34%) Sep 22 '17
7ab94976 bellyrub replied to @karencarrens/bookmarkable-series-don-t-lo… Sep 22 '17
36c9a16b epeakinfo follow marvirafael Sep 22 '17
လူသားတိုင်း လူရယ်ဖြစ်လာပြီဆို ဝည်းနည်းမှု့ ပူဆွေးမှု့တွေ ကြုံကြရပါတယ်။ ဒါက လောကကြီးကပေးတဲ့ လောကဓံတရားပါဘဲ။ ဝမ်းနည်းမှု့တွေကြုံလာတိုင်း ပျော်ရွှင်မှု့တွေနဲ့ဖြေဖျောက် ပူဆွေးသောကရောက်လာပြီဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှု့တွေနဲ့ အစားထိုးပြီ ဖျေဖျောက်ကြတာပါဘဲ။ ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်းက ပျော်ရွှင်မှု့ကို လိုးလားကြပါတယ်။ ရှာဖွေယူတတ်ကြပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု့ကိုလည်း ဘဝရဲ့ ထွက်ပေါက်အဖြစ် သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆို အမြဲတမ်းထွက်ပေါက်ဆိုတာ တနည်းမဟုတ်တနည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်းနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု့တွေ ကြုံလာပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်အားလပ်ရက်တွေမှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်ပြီ ဘဝအမောပြေ ထွက်ပေါက်ရှာတတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများဆိုလည်း သင်္ကြန်အားလပ်ရက်တွေမှာ ခရီးထွက်သူထွက် တရားစခန်းဝင်ပြီ ဘဝအေးချမ်းမှု့ ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီ အဆောက်အဦးအကြီးကြီးတွေမှာ တွေ့ဖူးကြပါမှာ တခုခုဖြစ်လာပြီဆို ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ Exit တံခါးပေါက်လေးတွေထားထားကြပါတယ်။ လူသားဘဝဆိုတာ အချိုအခါးသဘောအတိုင်း အကောင်းအဆိုးဒွန်းတွဲနေတော့ ကိုယ်ဖြစ်တာကြီးဘဲ ဖြစ်နေချင်လို့ မရသလို မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာရင်လည်း စိတ်ဓါတ်မကျဘဲ အကောင်းဆုံး ထွက်ပေါက်တခုခုရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အမြဲတမ်းကျရှုံးမနေဘဲ ကြိုးစာနေလိုက်ပါ။
ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့နေရာ ထွက်ပေါက်မှန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တချို့သောလူငယ်လေးတွေ ထွက်ပေါက်ရှာတာ မှားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့နေရာမှာ ပျော်ဖို့လောက်ဘဲရှာသင့်ပါတယ်။ အပျော်ရဲ့ အနောက်မှာ အပျက်ကပ်ပါလာပြီဆို အပျော်အပျက်ဖြစ်ပြီ မကောင်းသောထွက်ပေါက်အမှားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မြို့လေးမှာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးပြီ လူငယ်လေးတွေပီပီ တနှစ်လုံး ကြိုးစားလာတဲ့ ဖိအားတွေကို ပျော်ရွှင်မှု့ ထွက်ပေါက်အဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီ တမြို့လုံး ဆိုင်ကယ် အိတ်ဇောဖြုတ်ပတ်မောင်းကြတာ ဒါဟာ ကိုယ်တွက်တော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အပျက်သဘောဆောင်နေလို့ ပျော်ရွှင်မှု့ မဟုတ်တော့ဘဲ အပျော်အပျက်ဖြစ်သွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် facebook ကိုသုံးတာလည်း ပညာရဖို့နဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် facebook ကလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ ထွက်ပေါက်တခုပါဘဲ။ အလုပ်ထဲစိတ်တွေ ရှုပ်လာတဲ့ facebook ပေါ်တက် ဟာသလေးတွေကြည့်ရယ်မောလိုက် ရှုပ်ထွေးမှု့တွေပျောက်ရင် အလုပ်ပြန်လုပ်လိုက်တာဘဲ။ ကျွန်တော်က ဘဝကို ပျော်ပျော်နေတတ်သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ အမြဲတမ်းလည်း ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်။ ပျော်အောင်နေတတ်လွန်းလို့ အိမ်က အစ်မတို့အဒေါ်တို့က နင့်ကို သူများ ဒီလောက်ပြောဆိုနေတာတောင် အပြုံးမပျက်တတ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ရူးများရူးနေလားလို့ မကြာခန ပြောခံထိဖူးပါတယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့လူဘဝကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှကို လိုက်ပြီ ခံစားနေမယ်ဆိုရင် ဘဝကြီးပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ်။ ပင်ပန်းလွန်းလာရင် ရတဲ့ထွက်ပေါက်ကို ကောင်းသည် ဆိုးသည် မခွဲခြားဘဲ တိုးထွက်တတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ထပ်ထွက်ပေါက်တခုက ဘောလုံးကစားခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း အလုပ်ဆင်းအိမ်ပြန်ရင် ဘောလုံးကွင်းထဲသွားပြီ ဘောလုံးကန်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ပင်ပန်းမှု့ ဖိအားတွေအကုန်ပျောက်သွားစေတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာကို လုပ်ရင်း ထွက်ပေါက်ရှာနည်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါရာပေါ့ဗျာ စာဖတ်ဝါသနာပါရင် စာဖတ် ယောဂလေ့ကျင့်တာဝါသနာပါရင် ယောဂလေ့ကျင့်ပေါ့ အမျိုးမျိုး ကိုယ်ဝါသနာပါရာ လုပ်ပြီ ထွက်ပေါက်ရှာလို့ရပါတယ်။ လူတိုင်းက ကိုယ်ဝါသနာပါရာ စိတ်သန်ရာ လုပ်နေရရင် ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ သတ္တဝါပါဘဲ။ Facebook မှာတွေ့ကြမှာပါ ကိုးတန်းဆယ်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ သူတို့ဘဝမှာဘယ်လောက်ဖိအားများလည်းတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး အလွယ်တကူ ဘဝကို အရှုံးပေးထွက်ပေါက်ရှာသွားကြတာ နှမြောစရာကြီးပါ။
သူတို့အရွယ်လေးတွေက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစအရွယ်လေးတွေလည်းဖြစ် သူတို့ခေါင်းထဲမှာ သိစိတ်ထက် မသိစိတ်နှိုးဆော်မှု့ များတဲ့ အရွယ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် လွယ်လင့်တကူ မသိစိတ်ဖုံးလွှမ်းပြီ အလွယ်ထွက်ပေါက်ကို ရှာတတ်သွားကြပါတယ်။ ဒါကိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ပြီ ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကို ပြောချင်ပါတယ် မင်းတို့အရမ်းမှားတယ်ကွာ။ ရခဲတဲ့လူဘဝလေးကို အတိတ်ကုသိုလ်ကံနည်းနည်းလေးနဲ့ လူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပြီဘဲ မင်းတို့အရွယ်လေးတွေက နောင်သံသရာတွက် ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလို့ အစ်ကိုတော့ထင်တယ်။ အစ်ကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ သေရင် ပစ္စည်းဥစ္စာစည်းစိမ်တွေယူသွားလို့မရပေ့မဲ့ သံသရာအေးမဲ့ ကုသိုလ် သီလ သဒ္ဒါဆိုတာလေးတွေကို ယူသွားလို့ရတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေ ပြည့်စုံပြီဆိုရင် မင်းတို့ ဘယ်လို ထွက်ပေါက်ရှာရှာ အစ်ကိုဝမ်းသာမှာပါ။ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဘဝအရှုံးမပေးလိုက်နှင့်။ ရှေ့ဆက်ရမဲ့လမ်းက ဘယ်လောက်ပင် ခက်ခဲပါစေ ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသိတဲ့ဘဝမျိုးကို မသိစိတ်လေးအမှောင်ဖုံးပြီ ထွက်ပေါက်မရှာပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ ဘဝလမ်း လှေကားထစ်များလိုပါဘဲ။ အမြင့်ကို တက်လေ မောပန်းလေဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီတက်သွားရင် လှေကားလေးဆုံးရင် ပျော်ရွှင်မှု့ထွက်ပေါက်တွေ အများကြီးတွေ့ရသလို။ တက်နေရင်းနဲ့ ပင်ပန်းလို့ နောက်ပြန်ဆင်းရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့လမ်းလေးအတိုင်းဘဲ ပြန်ဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြင့်တက်ရလို့ မောတယ်ဆိုရင် ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာ ခနနား နောက်တကြိမ်ထပ်တက်ဖို့ ကြိုးစားမှာသာ အောင်မြင်မှု့ ပျော်ရွှင်မှု့ ထွက်ပေါက်တွေ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ထို့ကြောင့် ဘဝတကွေ့ အချိုးအကွေ့တွေမှာ နောက်သို့ပြန်မလှည့်ဘဲ ရှေ့သို့လှမ်းချီ မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးအတိုင်း အရှေ့ ကိုလှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းလေးတွေအတိုင်း အရှေ့ ကိုဦးတည် ဆက်လျှောက်ပြီ အကောင်းဆုံး ဘဝထွက်ပေါက် ပျော်ရွှင်မှု့တံခါးပေါက်လေးများကို ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ " ပျော်ရွှင်မှု့ တံခါးလေးများဆီသို့ " ခွန်အားဖြစ်ဆောင်းပါးလေးကို ရပ်ပါစေ။ ဆောင်းပါးလေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် သည်းခံဖတ်ပေးကြသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံး ကျေးဇူအထူးတင်ပါသည်။
Steemit members များအားလုံး မျှော်လင့်ခြင်းထွက်ပေါက်လေး အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီ ပျော်ရွှင်မှု့ တံခါးချပ်လေးများ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်နိုင်ကြပါစေ။
Author ; Htin Lin Aung
photo by google"
"Spring, Bloom, Cherry, White, Tree, Branches, Nature"
"Was ist eine Blockchain? Warum der Hype?"
*Bild: Anzeige der Bitcoin Nodes (teilnehmende Rechner) am 22.09.2017, 10:14 MESZ; Quelle: Bitnodes21.co*
## Was ist die Blockchain
1. Die **Blockchain ist eine Zusammenfassung unterschiedlicher, bereits bekannter technologischer Komponenten**: verteilte Netzwerke, Verschlüsselungsverfahren (für Zugriff und Versand) und Prüfsummen (für Signaturen).
2. Die **Blockchain entstand aus dem Versuch eine digitale Währung zu erschaffen** — den Bitcoin.
3. In Ihrer Ursprungsanwendung (Bitcoin) ist die Blockchain **ein auf allen teilnehmenden Rechnern verteiltes Kassenbuch**, das eine **definierte Menge an Transaktionen in Blöcken zusammenfasst**, diese signiert und dabei jeweils die Signatur des vorigen Blockes beinhaltet. Diesem Bezug auf den jeweils vorigen Block verdanken wir das Bild der Kette. Blöcke. Kette. Blockchain.
## Was bringt die Blockchain? (in der Theorie)
### Unveränderlichkeit der Historie von Transaktionen:
Mit zunehmender Zeit (= zunehmende Anzahl der Blöcke) wird es mathematisch höchst unwahrscheinlich, dass heute verfügbare Computer in der Lage sind, Daten in der Blockchain nachträglich zu manipulieren (wegen den Prüfsummen in den Blöcken, die auch die Prüfsummen von dem vorigen Block dokumentieren).
### Hohe Sicherheit gegen Angriffe auf das Netzwerk:
Aufgrund des verteilten Netzwerkes (auf jedem teilnehmenden Rechner liegen alle Informationen synchronisiert vor) ist es nicht möglich, mit einem oder auch 10% gekaperter oder übernommenen Rechnern die Blockchain zu tangieren. Je größer das Netzwerk wird, desto sicherer wird es also in diesem Aspekt.
### Hohe Sicherheit gegen unerwünschte Zugriffe Dritter:
Aufgrund der genutzten Verschlüsselungsverfahren (Öffentliche & Private Schlüssel) ist es mit heutigen Computern nicht möglich, die öffentlichen Schlüssel zu knacken. Nur wer den privaten Schlüssel besitzt, kann die Daten entschlüsseln bzw. Werte einer Transaktion für sich beanspruchen.
Höchste Transparenz: Alle Transaktionen auf einer Blockchain sind grundsätzlich einsehbar. Für alle. Auch Dritte. (wenn es einen Blockexplorer wie etwa den Bitcoin Explorer gibt: https://blockchain.info/de/ — Übersicht — Klick auf einen Block (z.B. 486447 führt dann zu den Transaktionen selber))
Wenn alle Parameter vollständig erfüllt sind, bringt die Blockchain:
### “Programmiertes Vertrauen”:
Intermediäre (Makler, Mittler, usw.), die “nur” Vertrauen zwischen Wirtschaftsakteuren herstellen (denke Bank, Versicherung, Börsenmakler/Börse, aber auch eBay, Uber, AirBnB, Spotify, usw.) können durch auf einer Blockchain befindliche Software ersetzt werden.
### Unverfälschbare Historien:
Von der Lebensmittelkontrolle bis zu allen Teilen für ein Auto lassen sich in der Lieferkette mittels Verknüpfung mit physischen Erkennungsdiensten (denke RFID, NFC, Scanner/Kameras jeglicher Art) kritische Merkmale unverfälschbar sichern
### Kontrollmöglichkeit aller Daten für den Verbraucher/Bürger:
Mittels der Blockchain ist es erstmals möglich, jegliche persönlichen und privaten Daten mit einer noch nicht dagewesenen Sicherheit zu digitalisieren und den Zugriff darauf zu kontrollieren — so werden Konstrukte wie der digitale Ausweis, die digitale Patientenakte und vieles mehr Realität werden können
### Sicheres Geld und Basis einer Ökonomie für aufstrebende Länder:
Bitcoin ist der nun (2017) fast 8 Jahre alte Beweis, dass eine Währung geschaffen werden kann, die nur von den Teilnehmern reguliert wird und sich ggf. nicht freien Staatsgebilden entziehen kann (denke Venezuela, Zimbabwe, China); der in Kenia geborene mPesa (Wikipedia) beweist, dass aufstrebende Länder technologische Sprünge vollziehen können und werden, die sich aufgrund der Saturierung mit Lösungen (auch schlechteren) in den Ländern Europas und der USA nicht oder nur sehr langsam und mühsam vollziehen lassen
Hat der Artikel was gebracht? Fehlt etwas, um die Blockchain zu erklären? Hinterlasse gerne Reaktionen/Kommentare…"
"<p>This wonderful post has receivedabellyrub of 4.34 % upvote from @bellyrub thanks to this cool cat: @karencarrens.
My pops @zeartul is one of your top steemit witness, if you like my bellyrubs please go vote for him, if you love what he is doing vote for this comment as well.</p>
virtual clayop producer reward: 391.347 VESTS Sep 22 '17